တောင်သမန်သားလေး: December 2015
Samsung Galaxy J2 ဖုန်းကို Root Genius ဖြင့် Root လုပ်နည်း
Galaxy J2 ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်တဲ့ညီအကိုတွေအတွက်
ဒီဖုန်းကို Root Genius ဖြင့် Root acess ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကြိုပြောထားချင်တာက တကယ်လို့ Root လုပ်လိုက်လို့ Firmware
ကျသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြောင့် ဖုန်းကိုမကလစ်ခင် Official Rom ကို
Download Here Root Genius for Windows
Root Genius Tool ဖြင့် Root လုပ်နည်းကိုတော့
Android Device များကို Root Genius Tool ဖြင့် Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy J2 SM-J200H 5.1.1 Lollipop Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy J2 ကို ကွန်ပျူတာ/ဖုန်း နှစ်မျိုးဖြင့် Root လုပ်နည်း
အရေးပေါ် Firmware လိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာရယူပါ
Galaxy J2 SM-J200GU ဖုန်းအတွက် 5.1.1 Lollipop Firmware တင်နည်း
Samsung J200M Galaxy J2 Duos Android 5.1.1 Lollipop တင်နည်း
Samsung J200Y Galaxy J2 Android 5.1.1 Firmwares တင်နည်း
Posted by lin linn at 5:07 AM
One-Click Root Tool for Almost All Devices [2.x-5.1] King of Kingroot နောက်ဆုံးထွက်နဲ့ Root လုပ်နည်း
အတိုးမသတ်နိုင်သေးတဲ့ All Devices နဲ့ One Click Root Tool အကြောင်း
ဒီနေ့တော့ ရေးမှဖြစ်တော့မှာမို့ ဖုန်းကလစ်သူများနဲ့ Service သမားများအတွက်
ဖုန်းတစ်လုံးကို Root လုပ်ရအောင်ဟေ့ဆိုရင် ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root လုပ်ချင်ကြတဲ့
သူတွေချည်းပါပဲ အလုပ်များတာကို မလိုချင်ကြဘူးလေ အလွယ်တကူနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်
နည်းလမ်းကို အထူးတလေ စိတ်ဝင်စားနေကြတာဆိုတော့ ဖုန်းမှာတင် One Click ဖြင့်
Root လုပ်ယူနိုင်တဲ့ Apk များကိုလူတိုင်းတောင်းဆိုနေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Root Tool apk များစွာအနက် China နိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီး အထူးသဖြင့်
One Click ဖြင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့ Apk တစ်ခုရှိပါတယ် အဲဒါကတော့
Amazing tool လို့ပဲပြောရလေမလား The most famous root tool
လို့ပဲပြောရလေမလား တကယ်ပဲ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းပါဆိုတဲ့
lollipop 5.1, 5.1.1 တွေကို တစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံဖြင့် အဟုတ် Root ဖောက်ယူနိုင်တဲ့
One-Click Root apk ကတော့ Kingroot apk ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားမိတာလေးတစ်ခုကတော့ Kingroot apk အတွက်
နောက်ဆုံးဗားရှင်း ထွက်ရှိလာ New Year နဲ့အတူ အပြိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် Root Tool နဲ့တိုးမပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်
ဒီတစ်ခါတော့ Suer လို့ထင်ပါတယ်၊ အားလုံးအတွက် King of Kingroot လေးဖြစ်လာပါပြီ။
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ KingRoot 4.6.5 Bata2 သည် Android Device များဖြစ်ကြတဲ့
ဗားရှင်း JellyBean 4.2.2 xxx များ KitKat 4.4, 4.3 xxx များနဲ့
Lollipop 5.1.1, 5.1, 5.0.2 များကို လုံးဝ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
1. Root has risk and may be voids your warranty.
2. We have two versions, one is mobile version( app) for one-click root, another is desktop version for root some special device which can not be rooted by mobile one. Attention please that the desktop version may be flash third party Recovery into your device.
3. Please check information in "DETAILS and RMARKS" section carefully before you decide to root your device by KingRoot.
4. Find more interesting thing in our official website
5. Statement: Why KingUser need internet connection and upload device information
6. We would like to extend us sincere gratitude to maksnogin, he help us translate KingRoot into Russian. We are deeply grateful of his help
Download Kingroot latest Versions
Download Kingroot V4.6.2 Version
Downlaod Kingroot V4.6.4 Pro latest
Download Kingroot V4.6.5 Bata2Version
ကွန်ပျူတာမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး Root ဖောက်ခြင်းကိုအသုံးပြုလိုတဲ့
Download Here Desktop KingRoot Version
1. For KingRoot app: just download, then install it into you device. Run it ,
done! KingRoot will do every other thing for you.
English version ဖြင့်အဆင်မပြေသေးတဲ့သူတွေအတွက်
Root လုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့ Kingroot Tool ကိုဒေါင်းလော့ရပါမယ်
ဖုန်းမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး Apk ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
Root apk ပွင့်လာတဲ့အခါ Root access is unavailable ဆိုပြီး
ပြနေပါလိမ့်မယ် အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ Try to Root ဆိုတာကို
တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး Rooting process တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါ
အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံသည် ဖုန်းကို Root လုပ်နေပါပြီ
Root လုပ်နေတုန်း အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ရပါမည်
အောက်ပါပုံအတိုင်း Root successfully ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဖုန်းမှာ Root access ရရှိနေပါပြီ Root Checker ဖြင့်
အားမရသေးရင်တော့ အောက်မှာ Galaxy Note4ကို Kingroot ဖြင့်
Root လုပ်ပြထားတဲ့ Video Tutorial ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
နာမည်ကြီး Samsung Galaxy S6 ကိုလည်း Root လုပ်ပြထားပါသေးတယ်
ဒီ Kingroot ရဲ့ Homepage ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Kingroot Apk ဖြင့် နောက်ပါ ဖုန်းများကို ဖုန်းမှာတင်
One Click နှိပ်ရုံဖြင့် Root လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
List of KingRoot Support [ZTE]
Support List of KingRoot [LG]
Support List of KingRoot [HUAWEI]
Posted by lin linn at 5:06 AM
OPPO ဖုန်းများကို Root လုပ်နိုင်မဲ့ OPPO Tools apk
Author: Ko Htoo December 28, 2015
OPPO ဖုန်းများကို apk နဲ့ Root ဖောက်ချင်သူတွေအတွက် OPPO Tools apk လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ application လေးနဲ့ OPPO R7 Lite တို့ OPPO R7 Plus တို့ပါ Root လို့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Download ရယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
Lucky Patcher v5.9.3 Apk
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ Lucky Patcher အသုံးပြုသူများအတွက် ၂၈ ရက်နေ့ ၁၂ လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ် ကိုတော့ တော်တော်များများသိမှာ Android App တွေ ဂိမ်းတွေ လိုင်စင်တောင်းတဲ့အခါ လိုင်စင်မတောင်းရအောင်လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ပြီးတော့ Free App တွေ ဂိမ်းတွေ ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီး အသုံးပြုတဲ့အခါ ကြော်ငြာတွေ တွေ့ဖူးမှာပါ ဖျက်လိုက်လည်း App ဂိမ်း တွေကို ပြန်ဖွင့်ရင် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ ပြန်ပေါ်လာပါတယ် အဲဒါတွေကို ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒီ ဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ ဖုန်းဟာ Root ဖြစ်ပြီးသားဖုန်းတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ လိုင်​စင်​တောင်းတဲ့ APK တွေမှန်သမျှ ဘယ်လိုဖြုတ်ချသလဲဆိုတာ အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.4 MB ရှိပြီး Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများ ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ်Full Version ဖြစ်စေချင်တဲ့ APK ကိုတချက်နှိပ်ပါ
စာကြောင်းတွေထက်ပေါ်လာပါက REMOVE LICENSE VERIFICATION ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးပါက ထက်ပြီးစာကြောင်း ၅ခုထက်ရွေးပေးရပါမယ် AUTO MODE ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ APPLY ကိုနှိပ်
စာကြောင်း ၃ခုထက်ပေးပါလိမ့်မယ် AUTO MODES ကိုနှိပ်ပေးပါ
ပြီးပါက LAUCHနဲ့ OK ကိုပြပါလိမ့်မယ် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးပါက BACK နဲ့ ထွက်လိုက်ပါ
♪ Android OS 5.0 အထိ One Click နဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ - Kingo Root v2.6 Apk For (Android & PC) ♫
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ KINGO ROOT လေးကိုလည်းဆောင်ထားကြပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာက တော့ ဖုန်းထဲမှာ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ Apk ရော ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Root ဖောက်နိုင်တဲ့ EXE ရော နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ မနေ့ကမှအသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ One Click Root Apk လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းထဲမှာတင် Apk လေးကို Run ပြီး Root ဖောက်နိုင် မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာပါ။ နောက်ပြီးကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ Android OS 1.5 ကနေပြီး 5.0 lollipop အထိကို Error ကင်းကင်းနဲ့ Root ဖောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ တရုပ်ဟန်းဆက်အမြောက်အများအပြင် Samsung, Google, HTC, Sony နဲ့အခြားသော ဟန်းဆက်များ စွာကိုလည်း Root ဖောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အရမ်းကိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေလို့ Service သမား များနဲ့ ကလိချင်သူများဒေါင်းယူသွားကြပါနော်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 1.1 MB လေးသာရှိပါတယ်ဗျာ။
For Phone For Computer
Happy New Year 2016 နှစ်သစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper လန်းနိုင်မယ့် New Years fireworks APK
ကျနော်ဆိုဒ်လေးကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Happy New Year မှာ ထာဝ
ရ ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေလို့ လင်း(စွယ်စုံ) www.linmss.org/ မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု
တင်ပေးလိုက်တာကတော့မိမိဖုန်းထဲမှာ 2016 နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုရန် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper
APK လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။မီးပန်းတွေကို ကာလာအစုံ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မီးပန်းရဲ့
အလွန်သာယာပြီးကျက်သရေရှိလှတဲ့ပေါက်ကွဲသံတွေနဲ့ အတူ 2016 ကို
Happy New Year 2016 နှစ်သစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper လန်းနိုင်မယ့် APK လေးကို
အဆင်ပြေကြပါစေ။ ------------------- လင်း(စွယ်စုံ) www.linmss.org ★★★★★★★★★
One Click နဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ - King Root Pro v4.6.5 build 20151229 (One Click Root) APK
One Click နဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ - King Root Pro လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်းလေးကို တောင်ဆိုထားသောဘော်ဒါတို့အဆင်ပြေပါစေ။ ဖုန်းထဲမှာတင် Apk လေးကို Run ပြီး Root ဖောက်နိုင် မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာပါ။Error ကင်းကင်းနဲ့ Root ဖောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
တရုပ်ဟန်းဆက်အမြောက်အများအပြင် Samsung, Google, HTC, Sony နဲ့အခြားသော ဟန်းဆက်များ စွာကိုလည်း Root ဖောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အရမ်းကိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေလို့ Service သမား များနဲ့ ကလိချင်သူများဒေါင်းယူသွားကြပါနော်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 3.1 MB လေးသာရှိပါတယ်ဗျာ။
Posted by lin linn at 4:51 AM
Posted by lin linn at 4:41 AM
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version - Facebook v59.0.0.0.255 Apk
Android ဖုန်းဘော်ဒါတို့အတွက် ဘော်ဒါတို့၏ မိတ်ဆွေးကောင်း Facebook ဗားရှမ်းသစ်လေဖြစ်တဲ့ facebook application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထူးအထွေ ပြောစရာမလိုပါဘူး Facebook ကို ကလေးတွေသိပြီး အခုရှိရင် .... Updated လိုချင်းသူများအတွက် အောက်မှာသာဒေါင်းလိုက်ပါတော့ဗျာ....ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့35MB ဖြစ်ပြီး Android OS, Tablet အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 4:12 AM
KINGO ROOT v2.6 Cracked APK [Root Almost Any Android Device]
Android ဖုန်းထဲမှာတင် One Click နဲ့ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ apk တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ Kingroot v2.6 Apk နောက်ဆုံးထွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ များ မေးနေကျအတိုင်း ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစား root လုပ်ပေးနိုင်သလဲ...? ဆိုတာ နောက်ဆုံးဗါးရှင်း ရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Root ပေးနိုင်တဲ့ Devices List ကို တခါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ Supported Devices List မှာ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်...
What’s New In v2.6 Kingroot Apk ?
Support for 5.1 and 6.0 Marshmallow.
New Root Engine.
KINGO ROOT v2.6 Cracked APK
KINGO ROOT for Windows
Posted by lin linn at 2:26 AM
ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့-AZ Screen Recorder – No Root
Android /Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ AZ Screen Recorder premium– No Root V 3.4 APK အသုံးပြုသူများအတွက် 28 ရက်နေ့ 12 လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ဆော့ဝဲလေးကဘာလဲဆိုတော့ မိမိတို့ဖုန်းတွေမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ်ဒီကောင်းလေးနဲ့ Screen Recorde လုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလုပ်ထားသမျှကို MP4 အဖြစ်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ AZ Screen Recorder premium ကို အသုံးပြုဖို့မိမိဖုန်းထဲမှာ Root Access ရှိရန်မလိုပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 2.53 MB ရှိပြီး Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများ ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by lin linn at 2:25 AM
CoC Player တွေအတွက် CoC Myanmar Font ကို chat box မှာပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရော UI အနေနဲ့ပါထည့်ချင်သူတွေအတွက် နှစ်မျိူးလုံးထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ CoC Myanmar Font Installer
social network ဗဟုသုတ နည်းပညာ, Android Toolkit
CoC Player တွေအတွက် CoC Myanmar Font ကို chat box မှာပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရော UI အနေနဲ့ပါထည့်ချင်သူတွေအတွက် နှစ်မျိူးလုံးထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ CoC Myanmar Font Installer လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ exe ဖိုင်လေးကိုရေးသားထားသူကတော့
ကျတော့်ရဲ့ကိုကြီး Ko Saing Maung ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီး CoC Myanmar Font ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်တော့
ဖုန်းမှာ Root access ရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ New year အတွက် New year Night မှ မျှဝေပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ ကိုကြီးက
ခုချက်ချင်းကြီးမျှဝေပေးလိုက်တာကြောင့် လိုအပ်မှု့ရှိခဲ့ပါက Download ရယူလိုက်ကြပါ ခင်ဗျာ။
Credit >>> Ko Gyi Saing
Posted by lin linn at 2:22 AM
Posted by lin linn at 2:21 AM
♪ အမေးများသော မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာပြသနာများ " ♫
မေး - ကျွန်တော့်ဖုန်းက iPhone5ပါ။ Software အကုန်သုံးလို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂိမ်းဆော့ရင် ပါဝါပြန်ပြန်ကျသွားတယ်။USB ကြိုးနဲ့ထိုးထားပြီးတော့သုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
ဖြေ - အစ်ကိုရေ ဒီ Error မျိုးက 3G ဖုန်းတွေ Tablet တွေမှာအဖြစ် များတယ်ဗျ။ ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လို Error မျိုးက iPhone တွေမှာ ခဏ ခဏတွေ့နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် ဘက်ထရီရဲ့အားသိုလှောင်မှုက နည်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ Error မျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် Battery အသစ်ကိုလဲတပ်လိုက်ပါဗျ။
မေး - ကျွန်တော့်ဖုန်းက ဖုန်းကတ်ထည့်ထားတယ်။ ဖုန်းခေါ် လို့မရဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဖြေ - ဖုန်းကတ်ထည့်တိုင်း ဖုန်းခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ GSM, CDMA သူ့အမျိုးအစားအလိုက်ထည့်ပါ။ အရင်က ဒီကတ်ထည့်ပြီးသုံး တာ အခုမှခေါ်မရတော့တာ။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဖုန်းကြောင့်ဖြစ် တာပါ။ No Sim လို့ပြတာလား။ No Service လို့ပြတာလား။ 1x ပြတာ လား။ ဒါတွေကိုစစ်ရပါမယ်။ No Sim လို့ပြတာဆိုရင်တော့ လိုင်း ကတ်ကိုမသိတာပါ။ ဒါကြောင့် Sim အထိုင်စစ်ရပါမယ်။ Sim အထိုင် နားက Component လေးတွေစစ်ရမယ်။ Sim အထိုင်ဗို့တွေစစ်ရပါမယ်။ No Service ဆိုရင် Firmware တင်တာတို့လုပ်ရမယ်။ မရဘူးဆိုရင်တော့ Network ပိုင်းက PA IC, RF IC နဲ့ Component လေးတွေစစ်ရပါမယ်။
မေး - ကျွန်တော့်ဖုန်းက Huawei 610 ပါ။ ဖုန်းအားသွင်းရင် ခဏလေးနဲ့အားပြည့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏလေးအားကုန်သွား တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဖြေ - အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ ဘက်ထရီကိုစစ်ပါ။ ရေ၀င်ထား တဲ့ ဘက်ထရီတွေဆိုရင်တော့ ပြန်လည်အသုံးပြုလို့မသင့်တော်ပါ ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဘက်ထရီက Connector နဲ့သိပ်မထိဘူး။ ဘက် ထရီချောင်နေရင်ဆိုရင်လည်း အားကုန်မြန်ပါတယ်။ Phone Board ပြားကိုစစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ပါဝါပိုင်းနဲ့ Charger IC ပိုင်းကိုအဓိက ထားစစ်ပါ။ Power IC ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို Charger IC ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Battery Connector နားက Component လေးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မေး - ကျွန်တော့် Samsung က Korea Model ပါ။ အင်တာနက် မဖွင့်ဘဲ အလိုလိုပွင့်နေတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ - အင်တာနက်အလိုလိုပွင့်တာက Virus ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို Samsung Korea Model တွေမှာလည်း Virus မကိုက်ဘဲ Error တက်တတ် ပါတယ်။ တကယ်လို့ Virus ကြောင့်ဆိုရင်တော့ Firmware တင်မှ အ ဆင်ပြေမှာပါ။ Virus ကြောင့်မဟုတ်ရင်တော့ အောက်ပါ နည်းအတိုင်း ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ Dialer ကနေ 319712358 ဟုရိုက်ပါ။ Password တောင်းရင် 774632 (or)996412 ဟုရိုက်ပါ။ ထိုနှစ်ခုမရလျှင် 110821 ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ Menu တစ်ခုတက်လာပါမယ်။ Menu ထဲက Netwrok Setting ကိုဝင်ပါ။ Network Setting ModeGSM 900 ကိုရွေးပြီး Home Key နှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
မေး - ကင်မရာဖွင့်တိုင်း Low Storage Space ပြတာ ဘာကြောင့် ပါလဲ။ ကူညီပေးပါ။
ဖြေ - Internal Memory ပြည့်နေရင် ကင်မရာမှာ Low Storage ဆို ပြီးပြတတ်ပါတယ်။ Application တွေ Install လုပ်တာများရင်လည်း RAM ထဲမှာပြည့်ပြီး ကင်မရာဖွင့်မရတာ မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေရင် အကောင်းဆုံးက Setting ထဲကနေ Factory Reset ချလိုက် ပါ။ Wiping လုပ်ပြီး Reboot ပြန်တက်လာရင် အစ်ကို့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာ Error ဖြေရှင်းလို့ရသွားပါပြီ။
မေး - အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် iCloud Lock အကြောင်းနည်းနည်းလောက်မေးချင်လို့ပါ။ Passcode Lock သော၊ Firmware ပြုတ်နေသော၊ Logo တွင်ရပ်နေသော iPhone အား iCloud Lock ရှိ၊မရှိ ဘယ်လိုစစ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ - iPhone တွေကို Firmware ရေးမည်ဆိုရင်တော့ iCloud Lock ရှိ၊ မရှိစစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ စစ်မည်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စစ်မည့် iPhone ရဲ့ imeir or s/n နံပါတ်တွေသိဖို့လိုပါတယ်။ ပါဝါဖွင့်လို့ရတဲ့ဖုန်း တွေမှာတော့ ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *#06# ကိုနှိပ်လိုက်ရင် imei နံပါတ် ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပါဝါဖွင့်လို့မရရင်တော့ iPhone 4, 4S, 6S, 6S, Plus တွေမှာ Sim Slot မှာကြည့်လို့ရပြီး iPhone 5, 5S, 6,6Plus တွေမှာတော့ ဖုန်း၏ကျောဖက်မှာ ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ imei or s/n တွေရပြီဆိုရင် တော့ www.icloud.com/activationlock ဆိုတဲ့ Website မှာ စစ်လိုက်လို့ Activation Lock On ဆိုရင် iCloud Lock ရှိပါတယ်။ Off ဆိုရင်တော့ iCloud Lock မရှိပါဘူး။
ဤကဏ္ဍအတွက် Today Mobile (ဖုန်း - 09-730 33 966 ၊ 09-4217 44 111 မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။)
Posted by lin linn at 2:16 AM
♪ Android Device မှာ Custom ROM ကို Flash ပြုလုပ်နည်း ♫
Android OS အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိလာတိုင်း စမတ်ဖုန်းများမှာ OS အသစ်ကို မြည်းစမ်းခွင့်မရကြပါဘူး။ Samsung, LG, Xiaomi, Huawei တို့အပါအ၀င် ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအားလုံးနီးပါးက OS အသစ်ကို သူတို့ရဲ့ UI Skin များနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဖြန့်ချီကြတဲ့အတွက် လအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းကြရပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်သင့် ဖုန်းများနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ဖုန်းများအတွက်တော့ ဒီထက်ပိုကြာတတ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့် ဖုန်းအများစုအတွက် OS အသစ်ကို မြည်းစမ်းခွင့် လုံးဝမရရှိကြပါဘူး။ Android OS အသစ်ထွက်ရှိတိုင်း ချက်ချင်းရရှိကြတာကတော့ Pure Android or Stock Android ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Google Nexus Device များပဲဖြစ်ပါတယ်။ Android OS အသစ်ကို လျှင်မြန်စွာ မြည်းစမ်းနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက Custom ROM တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ROM ဆိုတာ ဘာလဲ?
Android ရဲ့ ရောင်းအကောင်းဆုံး အချက်က Open ဖြစ်ပြီး Customize လုပ်နိုင်တဲ့ သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှ ဒိတ်အောက်နေတဲ့ OS Version ကို မနှစ်သက်ရင် Third-Party Developer များက Modified ပြုလုပ်ထားတဲ့ Android Version များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို Modified ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဗားရှင်းများကို ROM လို့ ခေါ်ပြီး ပြင်ပမှ Developer များရဲ့ ROM ဟာ သင့်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ ROM ထက် လျှင်မြန်စွာထွက်ရှိလာလေ့ရှိပါတယ်။
Custom ROM ကို Flash or Install လုပ်ဖို့ အောက်ပါ အချက်များလိုအပ်ပါတယ်။
အောက်ပါ အဆင့်များကို မပြုလုပ်ခင်မှာ သင့်ဖုန်းမှ အရေးကြီးဒေတာများကို အရင်ဆုံး သိမ်းဆည်းထားဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
Bootloader ဟာ သင့်ဖုန်းကို စတင်ဖွင့်စဉ်မှာ Run တဲ့ Program ဖြစ်ပါတယ်။ Bootloader ဟာ Device တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းမှ ခလုတ်အတွဲအစပ်များကို နှိပ်ရင် Recovery Mode ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီအတွက်လည်း နှိပ်ရတဲ့ ခလုတ်အတွဲအစပ်များဟာ မတူညီကြပါဘူး။ သင့်ဖုန်းအတွက် ခလုတ်အတွဲအစပ်ကို Google မှာ ရှာဖွေပါ။
2. Root လုပ်ပါ။
“ Root Permissions “ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဟာ Unix နဲ့ Linux နယ်ပယ်က ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး သင်ဟာ သင့် Device ရဲ့ System Administrator ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Root လုပ်ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ System Files, Parameters များကို ပြုပြင်နိုင်ခြင်း၊ Default Apps များကို Uninstall လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ အခြားအသုံးဝင်တဲ့ အရာများအားလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
3. Custom Recovery ကို အင်စတောလုပ်ပါ။
သင့်ဖုန်းရဲ့ မူလ Recovery ဟာ အနက်ရောင်စကရင်နဲ့ အဖြူရောင်စာသားများကိုသာ ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပြီး Low-Level Functions အချို့ကိုသာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android Device တိုင်းမှာ Recovery ပါရှိပြီး ခလုတ်အတွဲအစပ်များကို နှိပ်ပြီး Recovery ထဲဝင်ရတာပါ။ သင့်ဖုန်းအတွက် ခလုတ်အတွဲအစပ်များကို Google မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
Custom ROM ကို တင်ပြီးတဲ့အခါမှာ Factory Settings ကို Restore လုပ်ချင်ရင် အစောကတည်းက Custom Recovery ကို အင်စတောလုပ်ရမှာပါ။ အကောင်းဆုံးတွေကတော့ ClockworkMod Recovery နဲ့ TWRP Recovery တို့ဖြစ်ကြပြီး Play Store ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
4. Custom ROM ကို Flash လုပ်နည်း။
Custom ROM အကြောင်းကို သိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာများစွာ ရှိပြီး အောက်မှာဖော်ပြထားတာတွေကတော့ အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
• CyanogenMod : စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြီး Features များစွာပါရှိပါတယ်။
• MIUI : ဂရပ်ဖစ် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချရပါတယ်။
• Paranoid Android : လျှင်မြန်ပြီး Flexible ဖြစ်ပါတယ်။
• AOKP : စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံပါတယ်။
အဲဒီထဲက တစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ Custom ROM ကို အင်စတောလုပ်ဖို့ စိတ်အချရဆုံးနည်းကို ဖော်ပြမှာပါ။
• ROM ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Internal Storage or SD Card ထဲသို့ထည့်ပါ။
• ဖုန်းကို ပိတ်ပါ။ ခလုတ်အတွဲအစပ်များကို နှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်ပါ။
• Backup and Restore ထဲဝင်ပြီး Backup လုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ROM ကို အင်စတောလုပ်ရာမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ရင် မူလ ROM ကို Restore လုပ်နိုင်မှာပါ။
• ROM အဟောင်းကို ဖယ်ရှားမယ့် Wipe Data , Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache တို့ကို ပြုလုပ်ပါ။ ( Advanced ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ )
• “ Install zip from sdcard “ ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ “ Choose zip from sdcard “ ကို နှိပ်ပါ။ ဖုန်းထဲထည့်ထားတဲ့ ROM ကို ရွေးပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းက အလုပ်တွေ လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
• ဖုန်းက အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတဲ့ အထိစောင့်ပါ။ ဖုန်းကို Restart ချပါ။ ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်ဖွင့်ရင် သာမာန်ထက် အချိန်အနည်းငယ်ပိုကြာမှာပါ။ ၁၅ မိနစ်ထက်ပိုကြာနေရင်တော့ တစ်ခုခု မှားယွင်းနေပါပြီ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဘက်ထရီကို ဖြုတ်ပါ။ ( Power Button ကို မနှိပ်မိအောင် သတိထားပါ။ ) ပြီးရင်တော့ အဆင့် တစ်ကနေ ပြန်လုပ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်လည်း အဆင်မပြေရင် အခြား Custom ROM တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Backup and Restore ထဲသွားပြီး Restore လုပ်ရင် သင့်ရဲ့ မူလ ROM ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Posted by lin linn at 2:15 AM
♪ မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ - Channel Myanmar v1.0 Apk ♫
Channel Myanmar ဆိုတာကတော့ မြန်မာစာတန်းထိုးနိုင်ငံခြားဇတ်လမ်းကောင်းများကို တင်ဆက်ပေး တယ်ဆိုတာ တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ တင်ထားတဲ့ ဇတ်လမ်းကောင်းတွေကို ဒေါင်းယူကြည့်ရှု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ English , Chinese , Japan , India , Korea အစရှိတဲ့ ဇတ်လမ်းကောင်းတွေ ဇတ်လမ်းတွဲတွေ မျိုးစုံကိုတင်ေပးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဇတ်လမ်းအကျဉ်းကိုလည်း ရှင်းပြပေးထား တာဖြစ်လို့ ဇတ်လမ်းအကြောင်းသေချာ ဖတ်ပြီးသဘောကျပြီဆိုတာနဲ့ဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံခြားဇတ်လမ်းတွေကိုမှ သဘောကျကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
Credit to ==> Channel Myanmar
Posted by lin linn at 2:12 AM
ရှုပ်ပွပ်နေတဲ့ သင့်ဖုန်းရဲ့ဖိုင်အားလုံးကို တစ်နေရာတည်း color File Manager အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မယ့်-ES File Explorer/Manager PRO v1.0.4 APK
Posted by lin linn at 2:06 AM
Samsung Galaxy J2 ဖုန်းကို Root Genius ဖြင့် Root ...
One-Click Root Tool for Almost All Devices [2.x-5....
OPPO ဖုန်းများကို Root လုပ်နိုင်မဲ့ OPPO Tools apk...
♪ Android OS 5.0 အထိ One Click နဲ့အမှန်အကန် Rootေ...
Happy New Year 2016 နှစ်သစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Live ...
ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့...
CoC Player တွေအတွက် CoC Myanmar Font ကို chat box ...
♪ မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိ...
Galaxy Tab S2 SM-T815 Android 5.0.2 Root လုပ်နည်း
♪ Android Phone ဖြင့် QR Code များကို Scan ပြုလုပ်...
♪ ဖုန်းရဲ့ Original အသံပိုကျယ်လာစေမယ့် - Volume Ac...
Call Recorder – ACR Premium v16.2 Cracked APK
English Dictionary Offline for Android Phone
VivaVideo Pro:Video Editor App v4.5.6 PRO+MOD APK
Pho.to Lab PRO Photo Editor! v2.0.302 APK
💮💮Windows Zawgyi 💮💮
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Unicode Myanmar Font ထည့်နည်း
Viber ကို အချိန်ဇယားဖြင့် လိုသလို Offline လုပ်ထားန...
လှပသောဓာတ်ပုံ လေးတွေ frame ပုံလေးတွေ လုပ်ဖို့ apk
IMEI မှာ invalid ဖြစ်သွားတာကို ဖြေရှင်းနည်း
Android Device သမားတွေ အတွက် မြန်မာ Android app ဆု...
မြန်မာတို့အတွက် Huawei myanmar website
MTK Device များ Flashtool Firmware နဲ့ Firmware ပြ...
♪ " Facebook နှင့် Uber ပူးပေါင်းကာ ၀န်ဆောင်မှုပေးမ...
BAGAN KEYBOARD VERSION Pro 5.0 အားရယူပါ
iOS device အသုံးပြုလိုတဲ့သူများအတွက် iMazing
♪ " အမေးများသော မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာပြသနာများ " ♫...
♪ မြန်မာတို့အတွက် Huawei Firmware များကို ဒေါင်းယူ...
Minions Paradise v6.0.2295 Mod APK
Lava A1 root လုပ်နည်း
Lava iris 600 root လုပ်နည်း
WINDOWS PHONE 8.1, 8, 7.5,7များတွင် မြန်မာ FONT ...
MTK Device များ ဖြစ်တက်တဲ့ Emergency data error ကု...
♪ " Password ထိန်းမည့် မန်နေဂျာများ " ♫
♪ (22-Dec) မှာ Viber ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပြီ - Viber v...
♪ Root ဖောက်ထားတဲ့ Phone များမှာအသုံးတည့်မယ့် - Ro...
♪ " ဆော့ဖ်ဝဲမသုံးဘဲ ဖိုင်ပျက်များကိုဆယ်တင်ခြင်း " ...
PowerDirector – Video Editor.APK
♪ Christmas Live Wallpaper v5.02p Apk (18-Dec) ♫
Christmas ပုံလေးနဲ့ Vivo Video editor Update လေးပါ...
facebook လုပ်ချင်သူများအတွက် အောက်ကစာသားလေးကို အပြ...
♪ Movies & Musics များစွာကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေဒေါင်းယ...
3 IN 1 MYANMAR FONT TOOL (HUAWEI , SONY , SAMSUNG ...
ပျောက်သွားတဲ့ ဓါက်ပုံ ဗီဒီယိုတွေကို Recovery လုပ်ေ...
တွေးတောတာဝါသနာပါသူများအတွက် game လေးပါ
Maze 3D ball game လေးပါ
Pro Evolution Soccer 2014 - PSP (#1.06 GB#)
ANDROID ဖုန်းတွေအတွက်ဘက်စုံသုံး (ALL IN ONE TOOL)
ဂါထာတော် apk for Android Phone
MTK ဖုန်းတွေကို cwm ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်သူများအတွက် ...
♪ Android အတွက် လုံခြုံရေး ဆန်းစစ်ပေးမည့် tool ကို...
ဖုန်းထဲက virus တွေကို သတ်ပေးတဲ့အပြင် internet က vi...
OPPO R1001 Display error Fix Firmware
Myanmar Music Art (v1.2 For Android)